Fitandroana ny fahadiovana: manentana ny rehetra ny CUA sy ireo mpanohana azy | NewsMada
Fitandroana ny fahadiovana: manentana ny rehetra ny CUA sy ireo mpanohana azy
Nanomboka 2017, nandray fepetra ny Vondrona eoropeanina (UE) miaro ny fari-dranomasina amin’ny alalan’ny “EU BeachCleanup”. Mandray anjara amin’izany ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ka ny 27 novambra 2021 teo, nanadio ny Reniranon’Ikopa.
Maloto loatra ny fari-dranomasina maneran-tany, indrindra ny loto avy amin’ny fako plasitika mahatratra 80 %. Hita izany eny amin’ny reniranon’Ikopa, izay misy avy aty afovoan-tany mivarina any an-dranomasina. Ka ny CUA sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy : UE, minisiteran’ny Fanajariana ny tany, Let’s do it Madagascar, World cleanup day, Mr Bricolage, kopakelatra Star sy ny manodidina niaraka nanadio ny reniranon’Ikopa avy eo amin’ny fivarotana asa tanana Ambohitrimanjaka hatrany Anosizato.
Isan-taona, antapitrisa taonina ny loto mivarina any an-dranomasina, indrindra ny plastika poizina mamono ny zavaboary. Manana anjara andraikitra amin’ny fanadiovana izany ny faritra afovoan-tany, manentana ny rehetra hitandro ny fahadiovana, araka ny efa tapaka teo anivon’ny Firenena mikambana “Ndao hiaraka hiaro ny tontolo an-dranomasina” tamin’ny oktobra 2021.
“Ho fanohizana ny ezaka nataon’ny CUA, ny hanentananay ny mponina ny voka-dratsin’ny loto amin’ny tontolo iainana. Mandalo ihany izahay eto Ikopa, fa maneho kosa amin’ny rehetra ny adidy ataonay eto Antananarivo, Madagasikara sy ny eto ambonin’ny tany. Manentana ny mponina hisoroka ny loto rehetra manimba ny tontolo iainana”, hoy i Giovanni di Girolamo, masoivohon’ny UE eto Madagasikara.
Feno fako plastika
“Mahita izahay karazana fako plastika, tantin-jaza, sns, mahatonga anay eto hanentana ny olona fa tsy mety. Efa an-taonany maro izao zavatra izao, ny fiantraikan’izany, valo tapitrisa taonina ny loto mivarina any anaty ranomasina, loto misy poizina nefa isika ihany no mihinana trondro na mamono azy ireny”, hoy ny ao amin’ny Let’s do it Madagascar. “Ny kaominina mandray andraikitra ihany fa ny tena tsara, tsy anariana fako ny toerana toy izao. Atao anaty dabam-pako rehefa manary ary aleo azo ahodina no ariana”, hoy ny ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina. Amin’ny taona 2022, hisy tetikasa hanodinana ireo plastika hatao “pavé autobloquant”.